Asọmpi nke Injin Injinia ga-enwerịrị n'aka onye nrụpụta ihe - Geofumadas
Achọpụta na Onye Ọhụụ Injinia ga-enwetara n'aka onye nwe ụlọ
Septemba, 2018 Engineering
N’ịtụle etu esi eche ihu mmepe nke okwu a, izu nke mbụ m dịka injinia batara n’uche ozugbo; Mgbe m gụsịrị akwụkwọ, ekpebiri m ịga njem na ileta nne na nna m ochie na echiche nke ịnụ ụtọ ụbọchị ole na ole nke ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na n'otu ụbọchị, enwetara m nkuzi na mgbe ọtụtụ afọ gasị, anaghị m echezọ.
Nna m ochie bụ onye na-akpụ brik na onye na-ewu ụlọ nwere ọtụtụ afọ ahụmahụ, ụbọchị mgbe m bịarutere, ọ kpọrọ m ka m soro ya gaa ọrụ ọ na-amalite wee sị:
"Ekwula na ị bụ injinia, ma jụọ ihe niile ị chọrọ ịma"
N’ụbọchị ahụ amụtara m banyere isiokwu nke klas ụlọ akwụkwọ mahadum akụzighị m, dịka ọmụmaatụ, otu esi eso ndị na-ewu ụlọ (ndị injinịa na-ewu ụlọ na ndị ọrụ ọrụ), ịhazi ọrụ ụbọchị, nnabata na njikwa nke ihe na ngwa oru, tinyere otutu ihe ndi ozo. Amụtakwara m akụkụ nke ọrụ nke onye nyocha na onye ọrụ nke ọrụ ahụ, onye na-aza n'ihu ọha ajụjụ niile m jụrụ ha. Ozizi a niile enwere m ike ịnweta n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha chere na m bụ nwa akwụkwọ ma n'ihi nke ahụ ha nwere ịnụ ọkụ n'obi inyere m aka.
Na nchịkọta, amaara m na ụbọchị ọ bụla m nọrọ n'ọrụ, ọ ga-abụ ụbọchị mmụta, ọ bụrụhaala na m hapụrụ isi nganga nke injinịa m ma mara etu m ga-esi nweta nsọpụrụ na mmezi nke onye isi ọrụ ahụ.
N'ijizi abanye n'ime isi okwu nke ikike ndị injinia obodo ga-enwerịrị n'aka nna ukwu ahụ, anyị ga-ebu ụzọ mee ka ihe anyị pụtara site na "Competencies", nke bụ ihe ọzọ karịa: "ihe ọmụma ndị ahụ, ikike na nka mmadụ ga-emezu. rụọ ọrụ nke ọma, ma bụrụ njirimara ndị na-enyere ya aka n'ọhịa ụfọdụ ”.
Anyị kwesịkwara ịmara na onye nrụpụta nna ukwu "bụ onye na-ahụ maka ịhụ maka ọrụ ndị ọrụ ndị ọzọ rụrụ n'oge mmezu nke ihe owuwu ahụ, site na mbido ụlọ ruo na mmecha ọrụ", yana isi ọrụ ya nwere ike nyochaa na njikọ na-esonụ: http://www.arcus-global.com/wp/funciones-de-un-maestro-de-obra-en-la-construccion.
Ọzọ, anyị ga-ahụ ihe ndị bụ isi nke injinia obodo yana ọkachasị ebe ahụmịhe nke nna ọrụ ahụ, nke enwetara oge ga-enyere anyị aka ịzụlite ha, mee ka ha ka mma na iwusi ha ike na mmepe anyị dịka ọkachamara raara nye owuwu.
Ihe omuma banyere: Ihe ndị a bụ isi ihe ndị injinia obodo ahụ kwesịrị ịma tupu ya arụ ọrụ ya, bụrụkwa ndị enwetara n'oge agụmakwụkwọ ya. Anyị kwesịrị ime ka o doo anya na ụfọdụ n'ime ha na-emeziwanye site na ahụmịhe ahụ.
Ihe omuma banyere ihe eji eme ya: obu ezie na obu eziokwu na n’ime ulo akwukwo ha kuziri anyi banyere okwu a, enwere otutu uzo ndi isi oru kacha mara amara, dika ihe di nfe, odi nma nke ciment nanya site n’ile ya anya na metụ ya aka
Knowledgemara ụdị ala dị iche iche: n’ezie ịhụla ọtụtụ ihe ndị e gwupụtara n’ikwe, na-eme ka nna ukwu na-ewu ụlọ, dịka ọmụmaatụ, ịmara site na ahụmịhe nke ala ahụ dịka ntọala maka ntọala.
Ihe omuma banyere otu esi eme ka ihe eji eme ihe: ebe a ihe omuma nke onye nkuzi ga enyere aka obughi otu esi ebuli ha, kamakwa otu esi echekwa ha, gini bu ihe di iche na udiri ihe ndi ahu biara na oru a bu ihe akachasi nma maka oru , wdg.
Ihe omuma nke igwe eji eme ihe n ’oru: lee, injinia gha aghaghi imenyere ihe ndi mmadu n’eji eme ihe iji gosiputa ihe di iche na akụrụngwa ha dị iche iche, mana makwa etu esi edozi ma dozie akụrụngwa eji arụ ọrụ. Guinche, retro, jumbo, pickaxe, shọvel, okwute, wdg, ga-abụ aha ndị a maara nke ọma na ndị ọzọ agaghị, ebe ọ bụ na ha gbanwere dabere na obodo na mpaghara ebe a na-egbu ọrụ.
Nkà: Onye injinia agha ahụ aghaghị ịnwe nkà ndị ga-enyere ya aka ịrụ ọrụ ya nke ọma, n'adịghị ka ihe ọmụma ha na-enweta naanị na ngalaba ọrụ.
Ikike ịrụ ọrụ na otu na ikwukọrịta iwu nke ọma: naanị site na-elele ezigbo onye nkuzi ọrụ, injinia nwere ike mụta otu esi arụ ọrụ dị ka otu, otu esi enye ndụmọdụ na otu esi akwụghachi onye ọrụ ụgwọ.
Ikike ikwenye ọrụ na ịhazi ọrụ owuwu: ọbụlagodi mgbe nhazi ọrụ bụ ọrụ na ọrụ dịịrị injinịa ihe owuwu, ị ga-enwerịrị ọgụgụ isi zuru oke iji kparịta ma nyocha ihe ị haziri ya na onye isi ihe owuwu ahụ. Surely gha achoputa echiche ohuru banyere etu esi eme ubochi.
Ike ikpebi oge achọrọ maka ọrụ ọ bụla: a bụghị ikike a ka ji amata ihe, mana anyị ga-amatarịrị ndị ọrụ, ntozu ha, arụmọrụ ha na ike ha; ebe ha bụ akụkụ dị mkpa nke na-egosi arụmọrụ iji wee rụọ ọrụ ọ bụla; Ya mere, ihe mbụ a ga-atụle bụ nna ukwu na-ewu ụlọ.
Ike idozi nsogbu ndị ebilite n ’ụlọ ọrụ: n’oge a ka ahụmịhe ahụ bara uru ma mara ezigbo ọrụ nke ọrụ ga-enwerịrị ahụmịhe n’akụkụ a, ebe ọ bụrịrị na ọ tara ahụhụ, biri ma dozie ọtụtụ nsogbu ndị sitere na nke ọ bụla. ọrụ.
Nkà: Ha bụ nsonaazụ nke ihe omuma na amamihe kemgbe ọ malitere ọrụ ya na ọ jisiri ike tinyekọta injinia nkịtị n'ihi ahụmịhe ya na ọrụ dị iche iche.
Ndu ndi otu ndi oru na ndi oru guzobere: nke a putara inwe “ndi ndu”. Ndị injinia kwere ka onye ndu nke ndị na-arụ ọrụ ahụ bụrụ onye isi ọrụ, na-ewusi ike mgbe ọ bụla ha nwere ike n'akụkụ a; Duru ndị ọrụ aka gị wee merie onye isi gị na omume gị, nkà gị na ọgwụgwọ nkwanye ùgwù nye ndị ọrụ niile.
Kpebisie ike ihe achọrọ maka ọrụ ọ bụla: ebe a, ahụmịhe na ọmụma zuru oke nke ụzọ eji ewu ihe dị mkpa iji chọpụta akụrụngwa, ndị ọrụ na akụrụngwa dị mkpa iji mezuo otu ọrụ. Iji maa atụ, onye n’ọrụ a ga-enwe ike ịmata ụdị nke ihe, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na akụrụngwa dị anyị mkpa ịrụ ọrụ site na mpempe ụlọ, azịza ya bụ naanị otu "nna ọrụ"; ọ bụ ezie na oge na-aga, injinia nwere ike ijikwa ya na usoro ọrụ ka ukwuu.
Obi abụọ adịghị ya na enwere ikike ọrụ ọrụ nke injinia nkịtị kwesịrị ịnwe, nke anyị anaghị egosi na ndị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu, ebe ọ bụ na ha bụ ndị a na-amụta na mahadum ma ọ bụ enwetara site na ọmụmụ ndị ọzọ; dị ka njikwa nke mmebe ụlọ ọrụ, ma ọ bụ inwe ike iji ngwa ọnụahịa na mmefu ego. A na-achịkọta nkà ndị ae kwuru na usoro ndị a ugbu a na akụkụ 7 bụ isi nke agbakwunyere na profaịlụ nke onye injinia ga-enwerịrị iji nweta ihe ịga nke ọma ọkachamara, nke bụ:
Arụmọrụ na ikike ịmụ ihe,
Ikike ndi mmadu,
Ijikwa gburugburu ebe obibi,
Can nwere ike nyocha n'ime akụkụ ndị a na njikọ na-esote: https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/7-habilidades-que-debe-tener-un-ingeniero-para-alcanzar-el-exito-profesional
Na mmechi, anyi aghaghi ikwusi ike na onye injinia nke bidoro oru aka ya na ulo, ma obu onye bi ma obu onye nyocha, nwere ohere di uku inweta ma wusie ike ikike ndi gha enyere ya aka ibido profaịlụ ya dika okacha amara. Iji mee nke a, ọ ga-enwerịrị mmụọ ịdị umeala n'obi ma mara na na mahadum a zụrụ ya na ngalaba ọrụaka, mana na ahụmịhe ọrụ ya, nke ejiri ya nke ọma, ga-emecha kuziere ya. Ga-amatakwa na ndị ọkachamara ndị ọzọ nwere ahụmịhe na ihe ọmụma karịa na-arụ ọrụ ahụ, na otu n’ime ha ọ bụ onye nrụpụta ụlọ nwere ike ịkụziri gị ihe kachasị.
Previous Post«Previous 14as International gvSIG Conference: «Economy na Production»
Next Post Bentley Systems na-eme ka nzọ dị ike nye GIS mgbe ị nwetara Agency9Next »